Caaryado - Mestech Industrial Limited
Caaryada (caaryada) iyo dhimashadu waa aalado lagu sameeyo alaab madhan ama ceyriin ah oo leh qaybo leh qaab gaar ah iyo cabbir ku hoos jira ficilka xoogga dibadda. Qalabkani wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan, iyo qaabab kala duwan ayaa ka kooban qaybo kala duwan. Waa ka shaqeynta taas oo badiyaa bedesho xaaladda jireed ee maaddada si loo gaaro qaabka shayga. Caaryada iyo dhimashadu waa aalado wax soo saar ballaaran. Codsiga caaryada ayaa si weyn u wanaajiya waxtarka wax soo saarka iyo saxsanaanta wax soo saarka soo noqnoqda ee qaybaha. Waxaa loo yaqaan "hooyada warshadaha".
Caaryada iyo dhinta waxaa loo qaybin karaa laba qaybood iyadoo loo eegayo astaamaha ay ku shaqeeyaan
1. Dhimasho: codsiga qaabka geesaha ayaa ka dhigi kara kala-goynta maran ee adag (faaruqinta) iyadoo loo eegayo qaabka dusha, ama foorarsiga wax-u-sameynta extrusion. Dhimashada noocan ah waxaa loo isticmaalaa faaruqinta, been abuurka, madax qabow iyo wareejinta qaybaha.
2. Caaryaa: walxaha isku dhafan ama dareeraha ah ayaa lagu duraa daloolka caaryada, ama walxaha adag ayaa lagu dhalaaliyaa saabka caaryada, waa la buuxiyaa oo la qaboojiyaa si loo helo badeecado leh qaab la mid ah sida daloolka caaryada. Noocan ah caaryada waxaa loo isticmaalaa qaybo balaastig ah oo wax lagu duubo, silica silica, birta loo shubay. Guud ahaan caado ahaan, waxaan u kala saarnaa dhinta biraha aan birta ahayn sida aluminiumka iyo isku darsiga zinc sida dhimashada
Caaryada orodyahanka kulul
Caaryada duritaanka ee qaybaha gawaarida
Wasakhda duritaanka HASCO
Marka loo eego walxaha alaabooyinka lagu soo saaray caaryada, caaryada ayaa loo qaybiyaa:
caaryada biraha, caaryada caaga ah, iyo caaryada qaaska ah.
1. Qaab bir ah: oo ay ku jiraan shaabbadda dhinta (sida dhimashada dhinashada, foorarsiga dhinta, sawir qaadista dhimista, kala-goynta dhinta, dhimista dhimista, dhimista dillaaca, bulging dhinta, qaabeynta dhimashada, iwm.) , iwm), extrusion u dhinto, dhinto dhimashadu, dhinto been abuur, iwm;
Caaryada aan caadiga ahayn waxay u qaybsan tahay: caaryada caaga ah, caaryada aan-macdan lahayn ee aan dabiici ahayn, caaryada ciidda, caaryada faaruqinta iyo caaryada paraffin. Dhexdooda, horumarka degdegga ah ee balaastikada polymerka, caaryada balaastiggu waxay xiriir dhow la leedahay nolosha dadka. Caaryada caaga ah guud ahaan waxaa loo qaybin karaa: caaryada wax taaj oo kale duray, caaryada wax taaj oo kale extrusion, gaaska caawiyay caaryada wax taaj oo kale, iwm
Qaab-dhismeedka iyo dhimashadu waxay leedahay qaab-hawleed gaar ah ama qaab dalool ah, marankuna waa la kala-saari karaa (baalal-siinta) iyadoo la raacayo qaabka dusha iyadoo la isticmaalayo qaabka dusha sare ee geeska. Adoo adeegsanaya qaabka daloolka gudaha, maranku wuxuu heli karaa qaabka saddexda cabbir ee u dhigma. Dhimashadu guud ahaan waxay ka kooban tahay laba qaybood: dhaqaaqa u dhinta iyo mid go'an (ama feedh iyo dhinta), oo la kala saari karo lana xidhi karo. Qaybaha waa la soo saaraa markay kala baxaan, waxaana banaan lagu duraa godka dhinta si loo sameeyo markay xirnaanayaan.
Waxaa jira saddex marxaladood oo soo-saarka caaryada ah: 1. Qaab dhismeed; Farsamaynta caaryada; 3.A aqbalida caaryada
Mestech waxay siisaa macaamiisha naqshadeynta qaybaha balaastigga iyo qeybaha birta, soo saarista caaryada la isku duro, u dhinta caaryada iyo caaryada oo faaruqisa. Iyo adeegsiga wasakhda soosaarka ballaaran ee qaybaha balaastigga, qeybaha birta. Waxaan rajeyneynaa inaan kula shaqeyno si aan kuu siino wax soo saarka caaryada iyo balaastigga, soo saarida qeybaha birta iyo adeegyada.